IToyota Hilux idayise okuzedlula zonke ngoFebhuwari
Fanelesibonge Bengu | March 4, 2021
KUQHUBEKILE ukwehla kokuthengwa kwezimoto njengoba izibalo zangoFebhuwari zikhomba ukuthi zincane uma kuqhathaniswa noFebhuwari wonyaka odlule.
INaamsa ithe kwenzeke obekulindelekile njengoba izibalo ziqhathaniswa nezangaphambi kokubhebhetheka kweCovid-19 ngonyaka odlule.
Ngenyanga edlule kudayiswe izimoto ezingu-37 521 nokuyisibalo esehle ngo-5 775 noma u-13.3% uma kuqhathaniswa no-43 296 owadayiswa ngoFebhuwari wonyaka odlule.
Isibalo sezimoto ezidayiswe ngaphandle naso sehlile njengoba zibe ngu-29 582. Lesi yisibalo esehle ngo-2 561 noma u-8.0% uma kuqhathaniswa noFebhuwari wango-2020 lapho kwaphuma khona izimoto ezingu-32 143.
Kuzona zonke izimoto ezingu-37 521 ezidayisiwe, ezilinganiselwa ku-31 635 noma u-84.3% udayiswe emagaraji, u-10.0% uthengwe yizinkampani eziqashisa ngezimoto, u-3.4% uthengwe nguhulumeni kwase kwathi u-2.3% kwaba ngowezinkampani.
Isibalo sezimoto ezincane esime ku-24 270 sikhomba ukwehla ngo-5 325 noma u-18.1% uma kuqhathaniswa nezingu-29 622 ezadayiswa ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Izinkampani eziqashisa ngezimoto zithenge u-14.4% ngoFebhuwari.
Isibalo sezimoto zokusebenza, amaveni namatekisi sehle ngo-370 noma u-3.2% njengoba zibe ngu-11 246 kanti nyakenye zazingu-11 616.
Amaloli aphakathi athengiwe angu-560 kuthi amakhulu aba ngu-1 445.
NgokweWesBank, imoto edayise kakhulu ngoFebhuwari yiToyota Hilux okuthengwe angu-3 031, kulandela iVW Polo Vivo okuthengwe angu-2 543, Ford Ranger (1 858), VW Polo (1 733), Isuzu D-Max (1 315) neSuzuki Swift (945)